प्रहरी यतिसम्म त्रसितः निर्मलाका पोस्टर च्यात्ने अभियान नै सुरु - Everest Dainik - News from Nepal
प्रहरी यतिसम्म त्रसितः निर्मलाका पोस्टर च्यात्ने अभियान नै सुरु
काठमाडौं, मंसिर १९ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तलाई न्यायको माग गर्दै सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएको पोस्टर प्रहरीले नै च्यातेपछि सरकार थप आलोचित भएको छ ।
निर्मलाको न्यायका लागि दबाब दिँदै आएको समूहले ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ लेखिएको पोस्टर अभियान सुरु गरेको थियो । ‘एसिया प्यासिफिक समिटमा माइतीघर भिभिआइपी सवारी रुटमा परेकाले त्यहाँ आन्दोलन गर्न नदिनू भन्ने सरकारको निर्देशन थियो ।
याे पनि पढ्नुस ४४३ प्रहरी जवान हवल्दारमा बढुवा, को–कोले पाए मौका? (नामसहित)
तर, त्यही दिन प्रदर्शनमा आएको समूहका १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएका हौँ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख वसन्तकुमार लामाले भने, ‘यहीबीचमा एक प्रहरीले पोस्टर पनि च्यातिदिएछन् । हामी घटनाको छानबिन गरी निर्मलाको पोस्टर च्यात्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्छौं। निर्मलाको पोस्टर च्यात्न प्रहरीलाई कुनै निर्देशन छैन ।’
उनले पोस्टर च्यात्ने प्रहरी को हो भनेर छानबिन भइरहेको, तर पहिचान हुन नसकेको बताए । आफैले खटाएका प्रहरीको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा पनि पहिचान गर्न नसक्ने प्रहरीबाट बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधका दोषी पत्ता लाग्लान् भनेर आशा कसरी गर्ने ?
प्रश्न यो पनि छ । त्यस्तै, एकजना प्रहरीले आफूखुसी पोस्टर च्यातेको भनिए पनि पोस्टर च्यात्दै गरेका प्रहरीको फोटो देशका विभिन्न ठाउँबाट आउन थालेका छन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनकमा छ ।
ट्याग्स: Nepal police, Nirmala Pant
प्रहरी पेट्रोल पम्पमा पम्पमा एक करोड आठ लाख हिनामिना भएकाे खुलासा